Xest Ling 16mm Bench Drilling Machine
ယိုးဒယားနိုင်ငံမှ ထုတ်လုပ်ပေးထားပြီး လျှပ်စစ်ပါဝါသုံးစွဲမူကို လျော့ချနိုင်တဲ့ Drilling Machine အမျိုးအစားကောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ Induction Motor ပါဝင်မူနူန်းမှာ 550 W အထိပါရှိမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ Voltage အနေဖြင့် 240 V ကိုသုံးစွဲ နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဝယ်ယူအားပေးချင်သော မိတ်ဆွေများအတွက် J Brothers Company တွင်တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ် မှာယူရရှိနိုင်ပါကြောင်းသတင်းကောင်းပါးလိုက်ပါရစေဗျာ။
၁၂ လက်မ အိုးပါသော ၄ လက်မ သဲစုပ် Pump
သဲစုပ်သောနေရာ၊နှုန်းစုပ်သောနေရာများနှင့်ဘိုးပိုင်သုံး ၊ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများတွင်လည်း အသုံးပျြုနိုင်ပါသည်။
ခေတ်သစ်လယ်ယာ ကုမ္ပဏီသည် ထွန်စက်နှင့်နောက်တွဲ များကို ရောင်းချ ဖြန့် ချီ လျက်ရှိပါသည်။ လူကြီးမင်းတို့ အတွက် လယ်ကွင်းထဲတွင် အလုပ်လုပ်ရန် သင့်တော်သည်။ မာခေါက်ခေါက်မဖြစ်သောကြောင့် သက်တောင့်သက်သာ ကြာရှည်စွာ အလုပ်လုပ်နိုင်သည် စပရိန် အောက်ခံပေါ်မှ အိစက်နူးညံ့သောကူရှင်က ထွန်စက်၏ တိုးမိဆောင့်မိသော အရှိန်ကိုလျှော့ချပေးပြီး ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မူနည်းပါးစေသည်။ထွန်စက်မောင်းသူအား တစ်နေ့ လုံး တောက်လျှောက် အလုပ်လုပ်စေနိုင်ပါသည်။ဒါ့ကြောင့်လူကြီးမင်းတို့ အနေဖြင့် ၄င်းစက် ကိုဝယ်ယူလိုပါက ခေတ်သစ်လယ်ယာ ကုမ္ပဏီကို တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ် နိုင်ပါသည်။
<p>Forever Steel Company.,Ltd မှ လူကြီးမင်းတို့အဆောက်အဦးအတွက်လိုအပ်သော H-Beam , U-Beam , I-Beam များကို လူကြီးမင်းတို့စိတ်တိုင်းကျ ဈေးနှုန်းချိုသာစွာဖြင့် လက်လီ လက်ကား ၀ယ်ယူရရှိနိုင်ပါသည်။<br></p>
The Electronic wire rope hoist model CD1 and MD1 have the feature of compact, light, small-sized shape and smooth operation. Lt can be used not only on the overhead rails, but also be used in conjunction with many types of electric or manual cranes such as the sing-girder crane, the double-girder crane, the cantilever crane and the gantry crane. The electric hoist model MD1 with double lifting speed should be used in cases where the hoist model CD1 with single speed cannot meet the requirement for fine adjustment during precision operations.
Multifunctional A3 system for excellent document output quality Sophisticated, yet easy to use technology for maximised productivity Extensive range of optional finishing features and software solutions Discover state-of-the-art data security, featuring the Toshiba Secure HDD Designed to meet the highest environmental standards
HIgh Quality Oriental Motor
This product isacompact electronic-input speed controller and6W to 90 W speed control motor packages. It conforms to safety standards around the world and can be used in many countries.Conforms to the Safety Standards and Supports the Power Supply Voltages Used in Many Countries Around the World.This series conforms to the UL and CSA standards and the CCC (China Compulsory Certification) System. The series also has the CE marking affixed under the Low Voltage Directive.
Distinctive design and solid appearance 2	Energy-efficient system and environmentally safe refrigerant 3	Quiet operating system and easy maintenance 4	Powerful and consistent cooling performance 5	Clear heated glass (German Quality) door and internal lighting allows for attractive displays
သွားရင်းလာရင်း လွယ်အိတ်ထဲ ထည့်၍သယ်ဆောင်နိုင်သော အရွယ်အစားဖြစ်ပြီး နယ်လှည့်ရောင်းကားများ၊ ကုန်ပစ္စည်း လိုက်လံဖြန့်ချီသူများ၊ mini mart များ၊ ငွေလိုက်သိမ်းရသူများအတွက် များစွာအဆင်ပြေပါသည်။ ငွေစက္ကူအသစ် ၁၀၀မှ ၁၂၀အတွင်း၊ ငွေစက္ကူအဟောင်းအနွမ်း ၈၀မှ ၁၀၀အတွင်း ရေတွက်ပေးနိုင်ပြီး ၁မိနစ်လျှင် အရွက်ရေ၆၀၀ ထိ လျှင်မြန်စွာ ရေတွက် ပေးနိုင်ပါသည်။ BATCH function [အရေအတွက် ကန့်သတ်စစ်ဆေးနိုင်သောစနစ်] အရွက်၁၀၀အုပ်ကိုထည့်ပြီး ၂၅ရွက်သာ ရေ၍ယူလိုပါက BATCH ဖြင့် 25 ရွေးထားပါက ၂၅ရွက်ရေပြီးလျှင် ရပ်သွားပါသည်။ ADD function[ထပ်ပေါင်းရေတွက်နိုင်သော စနစ်] အရွက်ရေများစွာ အပုံလိုက် ရေတွက်ရသည့်အခါမျိုးတွင် ADD နှိပ်ပြီး နောက်ထပ်ရေတွက်သမျှကို ထပ်ပေါင်းရေတွက်ပေးနိုင်ပါသည်။ ✈ EUROPEနိုင်ငံသို့ပင် တင်ပို့ ရောင်းချနေသော အရည်အသွေးမြင့် ပစ္စည်းဖြစ်သဖြင့် စိတ်ချလက်ချ ရေရှည် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ အိမ်မီး AC ဖြင့်လည်း အသုံးပြုနိုင်သလို၊ DC 6Vကို AAဓာတ်ခဲ ၄လုံးဖြင့်လည်း အသုံးပြုနိုင်သဖြင့် လဘက်ရည်ဆိုင်စားပွဲပေါ်မှာပင် အရောင်းအဝယ်အတွက် သိန်းရာထောင်ချီတင်၍ လျင်မြန်စွာရေတွက်နိုင်သောစက်ကလေးဖြစ်ပါသည်။ ရေဝင်ခြင်း၊ ဆီ၊ဖုန်/သဲများဝင်ခြင်း၊ လွတ်ကျကွဲရှပျက်စီးခြင်း၊ ဖွင့်လှပ်ပြုပြင်ထားခြင်း၊ ACနှင့် အသုံးပြုစဉ် မီးအားဆောင့်တက်ခြင်း၊ အတွင်းမှဆင်ဆာမီးများ နေရာရွေ့နေခြင်း တို့မှလွဲ၍ ၁နှစ်အတွင်း ချို့ယွင်း ပျက်စီးပါက အခမဲ့ ပြုပြင်လဲလှယ်ပေးပါမည်။ စိတ်ဝင်တစားဖြင့် မရှင်းလင်းသည်များကို မေးလိုပါက (သို့မဟုတ်) ပစ္စည်း မှာယူလိုပါက 09- 263430191, 09- 777918199, 09- 975511477တို့ကို ဖုန်းဆက်၍ ဆက်သွယ်ရမည့် ဖုန်းနံပါတ်၊ မြို့နယ် နှင့် မှာယူလိုသည့် ပစ္စည်းအမျိုးအမည် တို့ကို မေးမြန်း မှာယူနိုင် ပါသည်။ ဆက်သွယ်မှာယူပါက ရန်ကုန်မြို့တွင်း Door to Door အိမ်အရောက်ပို့စနစ်ဖြင့် ပို့ဆောင်ပေး ပါသည်။ ဆိုင်မှာ လာရောက်လေ့လာကြည့်ရှု စမ်းသပ်ပြီး စိတ်ကြိုက်ဖြစ်မှ ဝယ်ယူလည်း ရပါသည်။ အခြားနယ်များမှ မှာယူလျှင် ဘဏ်မှ ငွေကြိုလွှဲရပြီး ငွေလက်ခံရရှိမှသာ ကားဂိတ်အရောက် ပို့ဆောင်ပေးပါ သည်။
၁၆ လက်မ အိုးပါသော ၄ လက်မ သဲစုပ် Pump
Lawn Mower မြက်ရိတ်စက်
High quality control. Prompt delivery time andexcellent service.New product Customer&#039;s design and logos are welcome and competitive price inavariety of designs.Small order acceptable1 compact body, easy to carry.simple to operate, suitable for the whole family power-driven, environmentally friendly and energy-saving.